Claimant's Important Instructions in Somalian - Immigration and Refugee Board of Canada
Claimant's Important Instructions in Somalian
Printable version (PDF, 333 KB)
Waxay adiga mas’uuliyadeedu ku saaran tahay helitaanka, kadibna u soo gudbinta Hay’ada Magangalinta Qaxootiga (Refugee Protection Division (RPD)) ee hoos timaada Hay’ada sare ee Socdaalka iyo Qaxootiga ee Kanada (Immigration and Refugee Board of Canada (IRB)), wax alla wixii dokumenti ah ee la xidhiidha islamarkaana lifaaq u noqon kara dalabkaaga magangalyo ee qaxootinimo. Waana inaad raadinta dokumantiyadaas si degdeg ah u gudagashaa oo aadan sina ula daahin.
Waxaa daruuri ah, qofka aad ijaaranayso ama aad qabsanayso si uu kuula taliyo waa inuu yahay qof ka ah xubin sharaf leh hay’adaha kala ah Ururka Garyaqaanada Gobolka (garyaqaan iyo garyaqaano kalkaal), Rugta Ansaxinta ee Kubeek (Chambre des notaires du Quebec) ama La Taliyaasha dhinaca Socdaalka ee Gudiga wax Toosinta Kanada (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council). Qofka xubinka ka ah ururadan saddexda ah ayunbaa marka dacwadaada lagu dhageysanayo Hayada Magangalinta Qaxootiga haddii u ku matalo lacag kaa qaadan kara. Haddii aad go’aansato inuu lataliye ku matalo waa inaad ku talagashaa inaad kharashkiisa adigu bixinayso.
Haddii aad rabto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo sameeyo dalabka, eeg Hagaha Dalbadaha (Claimant's Guide) iyo xeerka 50 iyo 54 ee Qeybta Xeerarka Magangalinta Qaxootiga (Refugee Protection Division Rules).
Xafiiska RPD sida kaliya ee uu ku badali doono goobta dacwada lagu dhageysanayo ayaa waxay tahay haddii ay sababta loo badalayo ku saleysan tahay wax la taaban karo, iyadoo laga shidaal qaadanayo shuruudaha ku taxan xeerka 53 isla markaasna laga heli karo Hagaha Dalbadaha (Claiman'’s Guide).